Guddiga DF u xil saartay dacwada badda oo ku wajahan Holland | KEYDMEDIA ONLINE
Guddiga DF u xil saartay dacwada badda oo ku wajahan Holland
Waxaa maanta maagalada Muqdisho ka amba-baxaya masuuliyiinta Dowladda Federaalka Soomaaliya uga qayb galaaya dhagaysiga dacwada badda ee u dhaxeeysa Kenya Iyo Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa goor dhow la filayaa in ay ka duulaan garoonka diyaaradaha ee Adan Cadde ee Magaalada Muqdisho wafgti uu hogaaminayo sii-hayaha xilka Ra’isul Wasaare ku xigeenka xukuumadda, Mahdi Maxamed Guuleed.
Waftigaan ayaa ku wajahan dalka Holand, waxaana la filayaa in ay Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee ICJ geeyaan feylasha dacwada Soomaaliya.
Guddiga Dowladda Soomaaliya u matalaya dhageysiga kiiska dacwadda badda oo saxaafadda kula hadlay garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa ka dalbaday shacbaka Soomaaliyeed in ay soo duceeyaan, isla markaana aan kiiskaan la siyaasadeyn.
Dowladdii Madaxweyne Xasan Shekh Maxamuud ayaa Maxkamdda ICJ u gudbisay dacwadaan, waxaana loo madlan-yahay in ay 15-ka bishaan Maarso ay Maxakamddu dhageysato doodaha qareenada labada dhinac.
Soomaaliya waxaa dacwaddan ku matali doona saddex qareen oo u kala dhashay dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska, xubinna ka ah Foley Hoag LLP oo ah shirkad sharciyeed xarunteedu tahay magaalada Boston.
Intii uu Farmaajo xilka hayay, Dowladda Kenya ayaa ku guuleysatay in ay Saddex mar dib u dhigto dacwada badda, hayeeshee ugu danbeyn Maxakamadda Caddaaladda Adduunka ayaa diiday in ay dhageysiga dacwada la baajiyo markii Afaraad, waxaana loo ballan san yahay isniinta soo socota.